‘फ्लप भएको छैन पुरानो डुङ्गा, फ्लप भन्ने खबर गलत’ - CHHEPARO
‘फ्लप भएको छैन पुरानो डुङ्गा, फ्लप भन्ने खबर गलत’
December 4, 2016 lchapagain4@gmail.com Movie Khabar 0
काठमाडौं, मंसिर १५ – यो हप्ता रिलिज भएको चिलचित्र पुरानोे डुङ्गालाई धेरैले आश गरे अनुसारको फिल्म नभएको प्रतिकृया दिए । केहीले सिनेमा राम्रो बनेको पनि बताए ।
केही पत्रकारहरुले फिल्म फ्ल्प भएका समाचारहरु प्रकाशित गरिदिए । जसले गर्दा निर्माता र निर्देशकलाई लाई एकदमै तनावमा पारिदियो । फिल्मको समिक्षा र आएका नकारात्मक खबरहरुबाट दिक्क भएका निर्देशक रामबाबु गुरुङले एक क्रिटिक्सलाई त फेसबुकबाट ब्लक नै गरिदिए ।
शुक्रबार रिलिज भएको सिनेमाले आइतबारसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ग्रस कलेक्शन गरेको छ । नेपाली सिनेमाको इतिहास हेर्ने हो भने तीन दिनमा करोड कमाउने सिनेमालाई फ्ल्प भन्न मिल्दैन । फिल्म सफल हुँदा हुँदै पनि पत्रकारले नबुझी सिनेमाका बारेमा नकारात्मक कुराहरु लेखेको निर्माताहरु मध्येका एक मणी पोख्रेलको भनाई छ।
उनका अनुसार समाचार लेख्नेहरुलाई फ्ल्प भन्ने शब्द कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा भएन । हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले पुरानो डुङ्गाले जति व्यापार गर्नु पर्ने हो त्यती नै गरिहेको जानकारी दिएका छन् । कसैले फ्लप भन्दैमा फ्लप हुने र सुपरहिट भन्दैमा सुपरहिट हुने कुरा नहुने मणिको भनाई छ । हाल पुरानो डुङ्गा उपत्यकाका २३ वटा हलमा र उपत्यका बाहिर ६२ वटा हलमा लागिरहेको छ ।
जात्राको असर परेको हो ?
केही अनलाइन पोर्टलमा प्रदिप भट्टराईको निर्देशनमा बनेको सिनेमा जात्राले पुरानो डुङ्गालाई असर गरेका समाचार पनि प्रकाशित भए । यस विषयमा हामीले फिल्म निर्माता मणी पोख्रेलसँग कुराकानी गर्दा उनले, आफ्नो फिल्मलाई जात्राले कुनैपनि असर नपुर्याएको बताए । फिल्मले दर्शकको माया पाएको र व्यापार पनि राम्रो गरिरहेको उनको भनाई छ ।
खासमा किन लेखियो फिल्म फ्लप भएको समाचार ?
पुरानो डुङ्गा फ्लप भयो भनेर समाचार लेख्दा आम दर्शकमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले विशेष गरी निर्मातालाई टाउको दुखाईको विषय बन्न पुग्यो । यस अघि कबड्डी र कबड्डी कबड्डी जस्तो सुपरहिट र चौतर्फी प्रशंसा बटुलेको फिल्म बनाएको टिमले पुरानो डुङ्गाबाट निकै नै आश गरेको थियो । विशेष गरी रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्ने फिल्ममा मौलिकताका साथै कमेडी अत्याधिक हुन्छ भन्ने अपेक्षाले नै पत्रकारहरुलाई निराश बनाएको हुनु पर्छ ।
पुरानो डुङ्गाले विलकुलै नयाँ स्वाद दिन खोजेको छ । तर दर्शक भने पुरानो डुङ्गा हेरेर हाँस्नलाई आँ गरेर बसेका थिए । यही कारण चलचित्र प्रति दुई खाले टिप्पणी हुन थाले । चलचित्र कमेडि जनरामा बनेको भन्दा नि यस्ले माझी समुदायको एक घरको गहन विषयलाई उठाएर कलात्मक तवरले निर्माण गरेका छौँ भनेर दर्शकलाई बुझाउन नसक्नु निर्माण पक्षको कमजोरी हो । अझ सिधा कुरा भन्दा प्रचारप्रसारमा पत्रकारहरुलाई त्यति महत्व नदिनु, चलचित्र ब्राण्डले चल्छ भन्ने भ्रम निर्माण टोलीमा हुनु नै चलचित्रको खराब समाचार बन्नुको मुख्य कारण हो ।
कहिँकहीँ प्रचारप्रसारमा हामीलाई चलचित्र निर्माण टोलीले स्थान दिएन भनेर प्रतिशोध साँध्नलाई नकारात्मक समाचार आएको हुनु पर्छ । निर्माता निर्देशकले केही न केही दम्भ पालेकै कारण विवादित समाचार आएको अनुमान पनि छ । जे होस् कलाको आफ्नै भाषा हुन्छ यसलाई बुझ्ने पनि व्यक्ति विशेष आफ्नै तरिका हुन्छ । नकारात्मक समाचार आयो भन्दैमा निर्माता निर्देशक रिसाउने, सत्य तथ्य नबुझी समाचार प्रकाशित गर्ने, दुवै नैतिक तथा व्यवसायिक ढंगले राम्रो होइन ।
कबड्डी र कबड्डी कबड्डी निर्देशन गरेर दर्शकको मन जितेका निर्देशक रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेको यो सिनेमामा दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, माओत्से गुरुङ, मेनका प्रधान लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका छ ।